Akhriso + daawo Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Puntland oo Heshiis ku kala saxiixday Xarunta Puntland ee Garoowe |
Akhriso + daawo Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Puntland oo Heshiis ku kala saxiixday Xarunta Puntland ee Garoowe
Dowladda Soomaaliya iyo Puntland ayaa heshiis iskaashi ku kala saxiixday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland oo uu ra’iisul wasaare, Cabdi Faarax Shirdoon iyo wafdi uu hoggaaminayo ay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay booqasho ku joogeen.
Heshiiska ay dowladda iyo Puntland kala saxiixdeen ayaa u qoraan sidan:
Waxaa booqasho qaadatay 09-kii illaa11-kii Maarso, 2013 ku yimid Puntland wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya (DFS) oo uu hoggaaminayo ra’iisul wasaaraha, Cabdi Faarax Shirdoon. Wadahadallo dhinacyo badan oo ay dhinacyadu yeesheen kaddib waxaa lagu heshiiyay qododbada soo socda:
1. Kor u qaadista Kalsoonida iyo xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Puntland:
1.1: In la wanaajiyo xiriirka iyo wadahadalka madaxda sare ee labada dowladood la isna dhaafsado booqashooyin, lana ilaaliyo anshaxa dowliga ah.
1.2: In la dhiirrigaliyo wada-shaqeynta hay’adaha kala duwan ee Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
1.3: In la dhaqan-gelliyo dhammaan heshiisyadii dhexmaray Puntland iyo dowladihii KMG-kaa ahaa wixii aan ka hor-imaanayn dastuurka dalka.
2.1: Isdhaafsiga xogta, khibradaha iyo isku xirista hay’adaha nabadgalyada.
2.2: Waxaa la isla gartay soo dhawaynta qaadista cunno-qabataynta hubka iyadoo la iska kaashanayo xagga hubka iyo saanadda ciidamada.
2.3: Dhisidda ciidan Qaran oo isku-dheellitiran iskuna dhafan, lagana soo qoro dhammaan goballada iyo degmooyinka dalka.
2.4: In si wadajir ah looga wada-shaqeeyo la dagaalanka argagaxisada iyo burcad-badeedda.
2.6: Waxaa lagu heshiiyy in ciidamada nabadgelyada Puntland laga caawiyo gunnooyinka, isgaarsiinta, gaadiidka, tababarrada iyo agabka (Logistics).
3. 0: Dhaqaalaha iyo Horumarinta:
3.1: Waxaa la isku raacay inay jirto baahi deg-deg ah oo ku saabsan sidii loo heli lahaa shillin Soomaali cusub.
3.2: Waxaa la isku raacay baahida loo qabo jaangoynta iyo midaynta canshuuraha (Tariffs) dalka oo dhan.
3.4: In dowladda federaalka Soomaaliya dedejiyo shirciga maal-gashiga shisheeye, lagana faa’iideysto khibradda Punland.
3.5: In Puntland saamigeeda ay ka hesho dhammaan mashaariicda horumarineed iyo bani’aadanimo ee heer Qaran iyadoo dowladdu soo dhawaynayso una fududaynayso ciddii caawinaysa Puntland.
3.6: In loo hawlgalo wadashaqaynta iyo mideynta hay’adaha socdaalka (Immigrations) .
4. 0: Sameynta Dowladda Federaalka iyo ka-mid-noqoshadooda:
4.1: Waxaa labada dhinac isla garteen in dowladda federaalku ay dar-dar-geliso nidaamka federaaleynta dalka si waafaqsan dastuurka isla markaana ka hortagto wax kasta oo wax u dhimi kara taabo-gelinta dhismaha dowlad gobaleedyada.
5.0: Hannaanka geeddi socodka Dimuqraadiyadda Puntland:
5.1: Waxaa labada dhinac isla qaateen in la bogaandiyo lana dhiirri-geliyo hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyeynta Puntland, isla markaasna la dhowro shuruucda iyo xasilloonida Puntland.
5.2: Dowladda Soomaaliya waxay taageeraysaa lana soconaysaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland.
6.0: Isku celinta hantida la kala haysto:
6.1: Waxaa labada dhinac ku heshiiyeen in dowladdu dedejiso isku-cellinta hantida gaar ahaaneed si loo helo dib u heshiisiindhab ah, iyadoo la magacaabayo guddi heer Qaran ah oo madax-bannaaan; go’aamadiisuna yeeshaan awood fulineed.
6.2: Waxaa labada dhinac ku heshiiyeen in dowladdu dedejiso dib u soo cellinta hantidii Qaran ee gudaha iyo dibadda.
7.0: Sameynta Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka:
7.1: Waxaa la isla qaatay in dowladddu dedejiso dhismaha Aqalka sare ee baarlamaanka si waafaqsan dastuurka federaalka.
Dhinaca dowladd Soomaaliya waxaa heshiiskaas u saxiixay Ra’iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid). Dhinaca Puntlandna waxaa u saxiixay madaxweynaha Puntland, C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole.
Heshiiskan oo fulintiisu ay dhiman tahay ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay oo dhaexmara dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland tan iyo markii la doortay madaxda dowladda cusub lix bilood ka hor.